SOMALIAYA BURBURKEEDII WAXAA SABAB U AHAA PUNTLAND CIDDA AY HADDA KA DHISME WAYDAYNA WAA IYAGA | Saxil News Network
SOMALIAYA BURBURKEEDII WAXAA SABAB U AHAA PUNTLAND CIDDA AY HADDA KA DHISME WAYDAYNA WAA IYAGA
Puntland waxay ahaayeen kuwii dilay Madaxweynihii reerkooda kasoo jeeday ee Crashiid Cali Sharmaarke taasoo sababtay inuu Somalia gacanta ku dhigo keligii taliye Maxd Siyaad barre ,
Puntand waxay ahaayeen kuwii sameeyey inqilaabkii fashilmay ee 1978 ee uu hogaaminayey Cirro taasoo shaki ka dhex abuurtay xukuumaddii waagaas jirtay .
Puntalnd Waxay ahaayeen Kuwii sababta u ahaa fashilkii iyo jabkii dagaalkii Somalia iyo Ethiopia isla markaasna laayey raggii loo soo xulay in abaal marin lasiiyo ee geesiyaasha ahaa ee lagu dilay xeradii Garabcase ee jigjiga taasoo ku abuurtay milataarkii Somalia niyad jab iyo
Burbur ku bilowday.
Puntland waxay sameeyeen Jabhaddii ugu horraysay ee debeddada u baxday ee la odhan jiray SSDF fadhigeeduna ahaa Ethiopia oo colaadii dagaalku weli taaganayd isla markaasna inta ay soo kaxaysteen Ciidamo shisheeye ayay ku qabsadeen labada degmo ee Galdogob iyo Balanbal kadibna calankii Ethiopia laga taagay taasoo axmaarada guulweyn u ahayd xilligaas.
Puntland waxay ahaayeen ciddii masuulka ka ahayd xasuuqii dagaaladii woqooyiga ka dhacay sida Moorgan , Jilbar ,cadceed iyo kuwii kale ee magacyada jinka lahaa
Puntlan waa meesha keliya ee xoolaha dhedig iyo ugaadha laga dhoofiyo.
Puntland waa meesha qura ee dadka laga tahriibiyo dekedda Bosaso.
Puntland waa meesha qura mishiinada lacagta foojariga ah lagu sameeyo.
Puntland waa degaanka saldhigga u ah Burcadbadeedka.
Puntland waa maamulka qura ee dad Somaliyeed ka masaafurisa sidii oo ay ajaaniib yihiin taasoo aan ka dhicin meel kali ay oo degaan somaliyeed ah.
Puntland waa meesha dawladda federaalka ahi ka dhismi wayday oo doonaysa inay ayagu sharciga iyo dastuurka lagu maamulayo u dejiso.
Puntland waa meesha maamulka gobolada dhexe ka dhismi wayday ee burburkeedana lacagta ku bixisa iyadoo askarteedii ayna mushahar haysan
Puntland markasta waxay masuuliyiintoodu isticmaalaan hadalo masuuliyad darro ka muuqato oo ummadda Somaliyeed kala geynaya
Puntland waa xudunta qabyaaladda iyo cuqdada qabaliga ku salaysan ee dadka lagu dhex faafiyo taasoo ay ku caanbaxday oo cidkastaaba qirayso.
Haddaba maaha wax lala yaabo hadalada kasoo yeedhay masuuliyiinta Puntland ee ku saabsan Hubka sharci darada ah ee saran markabka ku xayiran Berbera , hadalkaas oo haddii caddaymihiisa la waydiiyo aanay habayaraatee wax caddayn ah u helayn , mana fiicna in qofka masuulka ahi u hadlo sida dadka suuqa fadhi kudirirka u fadhiya maqaaxiyaha.
Waxaa kale oo laga dhadhansan karaa hadalka Puntland inuu ka hortegayo xaqiiqada soo socota oo uu ka werwer qabo in raadkeedu soo galo.
Qaybta labaad lasoco…
Abdirahman hiiraan <ukuli1963@gmail.com